सूचनाबाट डाकिएको बैठक सूचना टाँसेर स्थगित, प्रतिनिधिसभाले निर्णय गरेपछि मात्रै संयुक्त बैठक – Rajdhani Daily
सूचनाबाट डाकिएको बैठक सूचना टाँसेर स्थगित, प्रतिनिधिसभाले निर्णय गरेपछि मात्रै संयुक्त बैठक
संघीय संसद्को संयुक्त बैठक बोलाउने प्रक्रिया नमिलेको भन्दै सोमबार सूचना टाँसेर बोलाइएको बैठक सूचना टाँसेरै स्थगित गरिएको छ । संघीय संसद्को संयुक्त बैठक सञ्चालनसम्बन्धी नियमावली पारित गर्नका लागि बैठक बोलाइएको थियो । प्रक्रिया नपुगेको भन्दै दलहरूले विरोध गरेपछि बैठक स्थगित गरिएको संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. भरतराज गौतमले जानकारी दिए ।उनका अनुसार विगतमा सूचना टाँस गरेर नै संयुक्त बैठक बस्ने गरेकाले प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महराको निर्देशनमा संसद् सचिवालयले बैठक बोलाएको थियो ।
‘संयुक्त सदनमा राष्ट्रपतिको सम्बोधन, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ कोे बजेट प्रस्तुत गर्न सभामुखको निर्देशनमा नै संयुक्त बैठक बोलाइएको थियो,’ उनले भने, ‘यसपटक पनि संयुक्त बैठक सञ्चालनसम्बन्धी नियमावली पारित गर्नका लागि निर्देशन थियो ।’
डा. गौतमका अनुसार संयुक्त बैठक सञ्चालनसम्बन्धी नियमावली पारित गर्नका लागि बैठक सूचना टाँस गरी डाकिएको थियो । शुक्रबार पारित भएको प्रतिनिधिसभाको नियमावली र आइतबार पारित भएको राष्ट्रियसभा नियमावलीमा संयुक्त बैठक बोलाउनका लागि प्रतिनिधिसभा बैठकले निर्णय गरेपछि सोही दिन बस्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
संयुक्त बैठक सञ्चालनका लागि सोमबार बिहान बोलाइएको कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा दलहरूले प्रक्रिया नमिलेको भन्दै विरोध जनाएपछि स्थगित गरिएको हो । संयुक्त बैठक बोलाउन प्रतिनिधिसभा बैठक आगामी बुधबार बस्ने संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।
बुधबार बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकले संयुक्त बैठकको मिति आगामी ३ असारमा बोलाउने गरी प्रस्ताव तयार पारेको संसद् सचिवालयले जनायो । यसअघि संयुक्त बैठकको अध्यक्षता प्रतिनिधिसभाका सभामुखले गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा सभामुखले संयुक्त बैठक सञ्चालन गरेका थिए ।
‘प्रतिनिधिसभा बैठकमा निर्णय गरेर बैठक डाक्नुपर्नेमा सूचना टाँसेर संयुक्त बैठक डाकेकाले प्रक्रिया नमिलेको भन्ने आएपछि बैठक स्थगित गरिएको हो,’ सभामुख महराले भने, ‘अब जेठ ३० गते बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकले संयुक्त बैठकसम्बन्धी निर्णय गर्ने र सोहीअनुसार बैठक बस्नेछ ।’
नियमावली पारित गर्नका लागि सोमबार १ बजे प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठक बस्ने कार्यसूची आइतबार नै तय गरिएको थियो । राष्ट्रिय सभाले आगामी बैठक ३ असार दिउँसो १ बजेका लागि बोलाएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको नियमावली बहुमतले पारित भएको थियो भने राष्ट्रिय सभाको बैठकले नियमावली सर्वसम्मतले पारित गरेको थियो । दुवै सदनको नियमावलीमा फौजदारी अभियोग लागेका सांसद थुनामा रहे पनि निलम्वन नहुने व्यवस्था पनि पारित गरेको भन्दै प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले विरोध गरिरहेका छन् ।
संघीय संसद्को संयुक्त बैठकबाट नियमावली पारित भएपछि साझा समिति गठनका लागि बाटो खुल्नेछ । संसदीय सुनुवाइ र अनुगमन तथा मूल्यांकन विशेष समिति साझा समितिका रूपमा छन् । त्यस्तै, महाअभियोग समिति दुवै सदनमा हुने समिति हो । संघीय संसद्मा कुल १६ वटा समिति छन् । संसदीय समिति नहुँदा संवैधानिक निकायमा सिफारिस हुन सकेको छैन । संवैधानिक निकायका प्रमुखविहीन अवस्थामा सञ्चालन भैरहेको छ ।